Ehelada Jen. Yuusuf Cagey oo diiday in Meydkiisa la aaso, Dilkiisana ku eedeeyay saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda -News and information about Somalia
Home Warkii Ehelada Jen. Yuusuf Cagey oo diiday in Meydkiisa la aaso, Dilkiisana ku...
Odayaasha beelaha Saransoor oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay goaan ku gaareen inaan la aasin Jeneraalka iyadoo aan lala duugeynin sarkaalkii dilkiisa ka danbeeyay, waxayna cadddeeyeen in dilkiisa uu ahaa mid la qorsheeyay oo saraakiil badan ku lug leeyihiin.
Odayaasha waxay suaal geliyeen qaabka jeneraalka loogu dilay qolkii uu ku lahaa xeradii ciidamada oo loogu ogolaaday qof hub wata inuu u galo, waxayna muujiyeen shaki ay ka qabaan dilkiisa inay ku lug leeyihiin dad kale oo la qorsheeyay.
Hayadaha Amniga dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin geerida Jeneraalka, mana jiraan wax faahfaahin ah oo laga bixiyey dilkiisa iyo qaabka uu ku dhacay.
Next articleXOG: Xasan Sheikh oo si cad u diiday go’aanka Farmaajo ee doorashada 2021
Puntland oo diiday dalab kaga yimid dowladda Soomaaliya
Maxuu yahay Ajendaha fadhiga maanta ee golaha Aqalka Sare?